Deeq-samaynta rubucita afraad ee McKnight waxay taageertaa xalalka cuntada ee dadka iyo meeraha
Dadka asaliga ah iyo beeralayda adduunka oo dhan waxay muddo dheer aqoonsadeen xidhiidhka ka dhexeeya nidaamyada cuntada, caafimaadka, iyo meeraheena. Marka beeralayda deegaanku ay wax ka sheegaan caafimaadka cuntadooda, biyahooda iyo kheyraadkooda oo ay la wadaagaan aqoontooda, waa awood isbedel caalami ah. Waxay abuuraan habab cunto caafimaad leh, waara oo quudiya qoysaska, yareeya isbedelka cimilada, oo hagaajiya hab-nololeedyada iyo adkeysiga bulshooyinka oo dhan.
Rubucii afraad ee 2021, McKnight Foundation waxa uu bixiyay 200 deeqo oo cadadkeedu yahay $28,790,000. (eeg annaga keydka macluumaadka Liis buuxa oo deeqaha la ansixiyay.) Wadartaas, ku dhawaad $1.3 milyan ayaa galay deeq-bixiyayaasha barnaamijka caalamiga Ka mid ah deeq-bixiyeyaasha rubuci la soo dhaafay, barnaamijku wuxuu ku abaalmariyay $300,000 36 bilood SWISSAID, Hay'adda Swiss Foundation for Development Cooperation, iyada oo tijaabisay shabakad cilmi-baaris beeralay ah oo maxaliga ah ee Ecuador. Dhanka sare ee $1.3 milyan, $1.5 milyan oo dheeri ah oo deeq wax ka beddel ah ayaa aaday ururrada maxalliga ah iyo kuwa qaranka ee Afrika iyo Koonfurta Ameerika.
"Nidaamyada cunnadayadu waxay si qotodheer ugu xidhan yihiin isbeddelka cimilada iyo sinnaanta. Si loo xaqiijiyo mustaqbal ay dadka iyo meereyaashu ku barwaaqoobi karaan, waa in aan ka wada shaqayno si aan wax uga bedelno habka dunidu wax u soo saarto, u isticmaasho, uga fikirto cuntada." - Tonya Allen, McKnight Foundation
Barnaamijka caalamiga ah ee Foundation ayaa taageera shabakadaha cilmi -baarista beeralayda si kor loogu qaado nidaam siman oo siinaya beeralayda yar yar iyo bulshooyinka beeralayda cod ee mustaqbalka wadareed our. Tan iyo 2013, Aasaaska ayaa taageeray 30 shabakadaha cilmi-baarista beeralayda oo u dhexeeya cabbirka 15 ilaa in ka badan 2,000 beeralayda.
"Nidaamyada cunnadayadu waxay si adag ugu xidhan yihiin isbeddelka cimilada iyo sinnaanta. Si loo xaqiijiyo mustaqbal ay dadka iyo meereyaashu ku koraan, waa in aan ka wada shaqayno si aan u bedelno habka dunidu wax u soo saarto, u isticmaasho, uga fikirto cuntada, "ayuu yiri Tonya Allen, madaxa McKnight Foundation. "McKnight waa taageere waqti dheer ku faani karo cilmi baarista taas oo beeralayda yar-yar ka dhigta xarunta dib u habeynta hababka cuntada iyo xalalka deegaanka ee dhammaan."
Deeqda SWISSAID waxaa lagu bixiyaa McKnight's Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada (CCRP), kaas oo ka shaqeeya hubinta adduun ay dhammaan helaan cunto nafaqo leh oo ay si joogto ah u soo saaraan dadka deegaanka. CCRP waxay taageertaa cilmi-baarista beeralayda iyo beeralayda ku salaysan ee 10 waddan iyada oo loo marayo saddex bulsho oo ku dhaqan Afrika iyo Koonfurta Ameerika.
"Yapuchiris" (khabiir beeraley ah) Enrique Huallpa, Félix Paredes, iyo Atiliano Tiñini oo falanqeynaya ciidda Bolivia. Xuquuqda sawirka: Jules Tusseau
Cilmi-baarista Iskaashatada waxay awood u siisaa beeralayda inay helaan xalal cunto
Iyada oo sii kordheysa wacyiga caalamiga ah ee in nidaamyada cuntada warshaduhu ay gacan ka geystaan dhibaatooyinka aadanaha iyo meeraha labadaba, barnaamijka caalamiga ah ee McKnight Foundation wuxuu diiradda saaray dadaalladiisa ku aaddan taageeridda cilmi-baarista iyo ku-dhaqanka beeraha. Waxaan u baahanahay noocyo aqooneed oo maxalli ah iyo kuwa kala duwan si aan si buuxda ugu biirinno xalalka cuntada iyo cimilada.
Marka laga soo tago horumarinta sinnaanta weyn, shabakadaha cilmi-baarista beeralayda ayaa gacan ka geysta kordhinta dhaqamada beeraha ee waara. Shabakadahan ayaa sidoo kale isu keena beeralayda, hay'adaha cilmi-baarista, ururada horumarinta, iyo kuwa kale si loo hagaajiyo hababka beeraha iyo cuntada ee dhammaan. Hannaan wadaagga iyo dhisidda aqoonta, shabakadahan waxay raadiyaan xalalka deegaanka ee ku habboon gobollo gaar ah, iyagoo tixgelinaya baahida beeralayda maxalliga ah, mudnaanta, iyo xigmadda - oo ay ku jiraan kuwa haweenka iyo kooxaha kale ee taariikh ahaan la takooro.
Beeraleydu waxay caawiyaan horumarinta noocyada dalagga ee gobolka Huancavelica ee Peru. Xuquuqda sawirka: Grupo Yanapai
Dalka Ecuador, qoysaska beeralayda yar yar ee ku nool buuraleyda dhexe ayaa wajahaya xaalado aad u adag iyadoo dhibaatada cimiladu ay sii kordhayso. Iyagoo ka jawaabaya, beeralayda Andean waxay heleen habab cusub oo hal abuur leh si ay u daboolaan baahiyaha cuntada aasaasiga ah ee gobolkooda. Iyadoo lala kaashanayo ururada sida SWISSAIDBeeralaydani waxa ay horumarinayaan hab-dhaqannada wax-soo-saarka ee waara, hagaajinta nidaamka biyaha la cabbo iyo waraabka, ilaalinta dhul-daaqsimeedka-sare ee Andean, iyo keenaya rajo cusub oo gobolkooda ah.
SWISSAID waa urur caalami ah oo la shaqeeya sagaal waddan oo shuraako ah si ay u beddelaan nidaamka cuntada iyada oo loo marayo mabaadi'da agroecological. Ecuador, tusaale ahaan, SWISSAID waxay inta badan la shaqaysaa beeralayda dakhligoodu hooseeyo iyo dadka asaliga ah ee ilaha dakhligoodu yahay beeraha. Maalgelinta McKnight, ururku wuxuu sii qotomin doonaa shabakadaha cilmi-baarista beeralayda isagoo taageeraya mashruuc tijaabo ah oo lagu ballaarinayo dugsiyada beeraha beeraha ee afar gobol oo ku yaal bartamaha Ecuador. Beeralayda hormuudka ah ee khibrad dheer u leh kala-guurka agroecological waxay ku tababari doonaan siyaasadda, fududaynta, iyo xirfadaha barbaarinta—xoojinta awoodda beeralayda si ay codkooda u adeegsadaan oo ay ugu doodaan xuquuqdooda dawladaha hoose iyo gobolka hortooda.
"Maadaama isbeddelka cimiladu uu burbur ku keenayo nidaamyada beeraha iyo cuntada ee adduunka, waa inaan maqalnaa fikradaha iyo dhaqamada dadka beeraya abuur iyo beerista ciidda xaaladaha sii kordheysa ee adag," ayay tiri Jane Maland Cady, madaxa barnaamijka caalamiga ah ee McKnight. "Shabakadaha cilmi-baarista beeralayda ayaa na tusaya in beeraha, nidaamyada cuntada, sinnaanta, iyo meeraheenna ay si adag isugu xiran yihiin. Waa inaan ka wada shaqeynaa sidii loo dhimi lahaa faqriga, wanaajinta helista cuntada, daryeelka deegaanka, iyo taageeridda bulshooyinka caafimaadka qaba oo loo siman yahay, dhammaan iyadoo la yareynayo isbeddelka cimilada si loo ilaaliyo meeraheena.”
Si aad wax badan uga ogaato shabakadaha cilmi-baarista beeralayda, akhri Jane Maland Cady's maqaal dhawaan ku Tank Cuntada iyo kan maqaal aqooneed. Intaa waxaa dheer, tan warbixinta shabakada cilmi-baarista beeralayda wuxuu la wadaagaa waxyaabihii laga bartay kulan caalami ah Oktoobar 2021.
Saddexdan, waanu soo dhawaynay Beyene Gessesse isagoo ah sarkaalka barnaamijka ee kooxda caalamiga ah. Waxa uu si weyn ula shaqeeyay beeralayda, cilmi-baarayaasha, iyo maalgeliyayaasha horumarinta si loo hirgeliyo barnaamijyada sugnaanta cuntada ee guuleysta. Sidoo kale waanu soo dhawaynay Robert Harter Kaaliyaha barnaamijyada taageera is dhexgalka barnaamijka. Intaa waxa dheer, waanu u hambalyaynay Lue Vang markuu u dallacay maamulaha maaliyadda. Waxaan si diiran u macsalaameynay Arleta Little, madaxa barnaamijka fanka iyo dhaqanka iyo agaasimaha barnaamijka Fellowships Artist, oo ka tagtay doorkeedii agaasimaha fulinta ee Xarunta buugta akhriska qoraalka ah.
Ugu dambeyntii, Ben Hecht, Hogaamiye reer magaalka ah iyo maamulihii hore ee Magaalooyinka Nolosha, ayaa ku biiray Mu'asasada lataliye sare oo booqasho ah. Waxa uu diiradda saari doonaa sawiridda caasimadda qaranka si uu u taageero dadaallada dib-u-nooleynta ee ay bulshadu hoggaamiso ee udub dhexaad u ah u adkeysiga cimilada iyo dhaqamada siman ee Magaalooyinka Mataanaha ah.